Global Voices teny Malagasy » Pakistana: Avelao Hanidina Ireo Papango · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Jona 2017 9:48 GMT 1	 · Mpanoratra Halima Khan Nandika miora
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
Hatrizay dia nankalaza ny fetin'ny Basant  (lohataona) tamin'ny alàlan'ny fampanidinana papango ny vahoaka tany amin'ireo faritra maro ao Pakistana, indrindra ny tao Lahore. Saingy tafalatsaka anaty toerana saropady io fomban-drazana io tanatinà fotoana fohy. Tamin'ny 2005, noporofoin'ny Pakistaney iray mpahay lalàna tanatinà fitsaràna tao Lahore fa tsy fankalazàna Hindoa fotsiny ihany ny Basant fa lalao mahafaty. Hita tanatin'ireo fanoherana manan-danja hafa ny fampiasàna kofehy mahafaty izay niafara tamin'ny fahafatesan'ankizy sy ny fahatapatapahan'ny fampitàna angovo. Taorian'ny fitsaràna, noraràn'ny Fitsaràn'i Lahore ny fampanidinana papango ao amin'ny faritanin'i Punjab .
Velona ny adihevitra, vao haingana izay, rehefa navahan’ ny Fitsaràna Avon'i Lahore ny fanangonantsonia iray natao hanalàna io fandraràna ny fampanidinana papango io sy rehefa nodinihan'ny fitondrana ho hetsika mampidi-doza izany. Mbola manantena i Raza Rumi ao amin'ny Lahore Nama fa hesorina io fandraràna io:
Hafa ny fomba fijerin'i  Hamza Ahmed Qureshi ao amin'ny Lahore Metblogs:
Amin'izao toejavatra izao, mieritreritra ny hitondra ny fampanidinany papango  any Inde mpifanolobodirindrina aminy mihitsy aza ireo Pakistaney mpandefa papango. Na eo aza ilay fandraràna dia afaka mahita ireo papango an-jatony misidina eny an'habakabak'i Lahore, izay mampiseho ny lazany.
Nitatitra ny  fantsona TV tsy miankina fa 75% an'ny vahoakan'i Punjab, foiben'ny fankalazàna ny Basant, no te hampanidina papango. Saingy tsy mihevitra ny hilefitra manoloana ny marimaritra iraisan'ny vahoaka ny governemanta sy ny fitsaràna. Misy ireo tatitra milaza fa efa vonona ny mpitandro filaminana hijery sy hanasazy ny fandikàna mety hisy an'ilay fandraràna. Azo inoana fa hahavaky fo ny maro izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/11/100863/
 noraràn'ny Fitsaràn'i Lahore ny fampanidinana papango ao amin'ny faritanin'i Punjab: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4792776.stm
 Hafa ny fomba fijerin'i: http://lahore.metblogs.com/2010/02/11/basant-ban/
 manamarika i : http://lahore.metblogs.com/2010/02/11/focus-what/
 Nitatitra ny: http://www.opfblog.com/6519/lahore-punjab-govt-considers-lifting-ban-on-basant/